Isixhumi esezingeni eliphakeme esisetshenziswa kuzicelo zezolimo ukuqinisekisa ukugeleza kwamanzi kusuka kumbhobho omkhulu we-PE kuya kumadriplines anezindonga ezincanyana. Ukubekwa uphawu kwenjoloba kuyadingeka ukuxhumana nepayipi elikhulu. Ukuxhumeka ne-dripline kwenziwa yi-nut. Ngenxa yokuxhuma kwe-valve, ukugeleza kwamanzi kungavalwa noma kushintshwe kunani olifunayo.
Umbala: Mnyama / Luhlaza okwesibhakabhaka
Usayizi: 16mm / 20mm
16mm / 20mm Drip tape valve
Ama-valve wamateyipu wokuxhuma yizinto ezixhuma ezisetshenziswa ezinhlelweni zokunisela lapho ufaka amateyipu e-drip anezindonga ezincanyana.
Zisetshenziselwa ukuxhuma iteyipu yedrophu nepayipi le-PE elihlinzeka insimu ngamanzi.
Izixhumi ezinobubanzi obungu-16 mm zilungele ukuxhuma amateyipu wokudonsa onobude bomugqa ongafika ku-200 m, futhi i-valve ivumela ukuvalwa okunamandla kwesigaba ngaphandle kokuvala konke ukunisela.
Izinto ezenziwe ngazo ziyamelana namazinga okushisa adlulele kanye nemisebe ye-UV.
Lezi zixhumi zibalulekile ekwakhiweni kwezinhlelo zokunisela ngenkasa ngokusebenzisa amateyipu edonsa.
Umumo wazo wenziwe wafana futhi wafanisa amanye amateyipu wokudonsa anezindonga ezincanyana emakethe.
Ukukhethwa okukhulu kwalokhu kufakwa kuvumela ukusetshenziswa kwabo ekucushweni okuhlukahlukene kokuxhuma (ngepayipi, ngentambo, enye iteyipu).
Langaphambilini Brass umlomo wombhobho Sprinkler
Olandelayo: Irrigation lokulinganisa- Garden Series 17MM (POM)
Anti-Ukuvuza Mini Valve
Mini Valve Ngocingo
Mini Valve Ngocingo For Tape
Mini Valve Ukuze Layflat
Mini Valve Ukuze Pe
Mini Valve Offtake Nge Gasket
Irrigation lokulinganisa- Garden Series 17MM (POM)
Irrigation mini valve- INGONYAMA